विन्दु अनलाइन- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
उसले मलाई दया देखाउँदै झन् खसाएर भन्यो– ‘विनय तिमीले केही दिन अघिदेखि जसलाई डेटिङको लागि फेसबुकमा म्यासेज छोडिरहेका थियौ, लभसभको कुरा गरिरहेका थियो नि ऊ मेरी श्रीमती हो । तिमीले उसलाई पठाएका पोर्न फोटोहरु पनि मैले देखेको थिएँ ।’
भाद्र २७, २०७७ घिमिरे युवराज
स्वरुप मेरो अगाडि भएर पनि मलाई हेरिरहेको थिएन । मलाई भने अरु कसैले देख्लान् भन्ने डर थियो ।
मोबाइल फोनको भाइब्रेसनले कफी टेबल थर्कियो । झस्किएँ ।
क्याफेमा बसेको पन्ध्र मिनेटभित्र मेरो फोनमा तेस्रो कल थियो । पहिलो फ्याक्ट्री पार्टनरको । दोस्रो लाइफ पार्टनरको । तेस्रो फोन पनि कुनै संकोचबेगर नै उठाएँ । नयाँ जग्गा बिक्रीको कमिसन मैले पार्टनरलाई बाँड्नु थियो । तर, खातामा पैसा थिएन । ‘चेक बाउन्स’ हुन्छ भन्ने थाहा थियो । संकटबाट बच्न ‘चेक काटेर’ दिएँ । म फोनमा घिडघिडाइरहेको थिएँ—‘त्यसो नभन्नुस् सर । कहिलेकाहीँ यस्तो हुनेरहेछ । आजैको मितिमा धेरै चेक काटेछु । सबैले आजै पैसा झिकेछन् । मारमा हजुर पर्नु भयो सर । प्लिज बैंकलाई कम्प्लेन नगर्नुस् । भोलि बिहानसम्म पर्खिदिनुस् ।’ केही घण्टालाई थुमथुम्याउनु पनि मेरा लागि ठूलो राहत भएको थियो । त्यत्रो पैसा भोलि कहाँबाट ल्याउने भन्ने उपाय खोज्न बाँकी नै थियो ।
मेरो ठ्याक्कै विपरीत कुर्सीमा बसेको स्वरुप मसँग सहज थिएन । खासमा उसको बैठक मात्र कुर्सीमा थियो । भावनात्मक रुपमा ऊ त्यहाँ थिएन । यस्तो लाग्थ्यो दुई फिट चौडाइको हामीबीचको कफी टेबल भावनात्मक रुपमा दुई माइल फराकिलो भएको थियो । जतिसक्दो उ मबाट आफ्नो प्रश्नको उत्तर चाहन्थ्यो । उत्तर हैन ऊ पैसा चाहन्थ्यो । र, म दुई माइल परबाटै अलप हुन चाहन्थेँ । फोनमा म घिडघिडाइरहेको सुनेर ऊ दिक्दार देखिन्थ्यो ।
विन्दुको फोन आयो । दिउँसो १ बजे भेटौँ भनेर फेसबुक म्यासेन्जरमा म्यासेज छोडेको थिएँ । १ यहीँ बज्यो । मैले फोन उठाइन । एसएमएसको रिप्लाई पनि गरेको थिइनँ । रिप्लाई गर्ने अवस्थामा भए पो ।
स्वरुप उसको अफिसदेखि क्याफेसम्म बाटोभरि मसँग बोलेन । एउटा ठिकैको क्याफेमा उसले मलाई डोर्याएको थियो । सायद ऊ यो क्याफेमा त्यति आउँदैन । ऊ नियमित जाने फेन्सी क्याफेमा वेटरहरुको अगाडि मलाई गाली गर्न सक्ने थिएन । अनि मेरो लागि चियाकफीमा उसले धेरै खर्च गर्नेवाला पनि थिएन । सायद ऊ क्याफेमा आउने सोचमा पनि थिएन । अफिसमा बोलाएर उसका स्टाफहरुको अगाडि मलाई गाली गर्न सक्ने स्थितिमा पनि ऊ थिएन । गाली नै गरे पनि उसको आक्रोश सहज रुपमा निस्कनेवाला थिएन । त्यसैले उसले मलाई नजिककैको क्याफेमा लान कर लाग्यो । म त उसको पछिपछि लाग्नुको विकल्प थिएन ।
‘नेभर लाई’ नामको क्याफेमा उ छिर्यो । क्याफेको नामले नै ऊ मलाई लज्जित बनाउन चाहन्थ्यो । स्वरुप कम्ताको छ । ऊ कति कुरा नबोलेरै धेरै भनिदिन्छ । मानिसहरुलाई व्यवहारले सबक सिकाउन चाहन्छ । त्यसैले क्याफेमा छिर्नुअघि टक्क रोकिएर उसले ‘एन ई भी ई आर–एल आई ई’ पढेको थियो । आर उल्टो थियो, आईमा आँखा थियो । मैले पनि नदेखे जस्तो गरिदिएँ । मेरो लागि त्यो नाम ‘नेभर लाई’ हैन ‘नेभर साई’ बराबर भयो ।
म उसलाई भेट्न न आउन पनि सक्थेँ । तर, उसले धेरै पटक फोन, एसएमएस र गाली...!–(गाली नै त गरिसकेको थिएन, म झन् सम्पर्कमा नआउने डरले)—गरिसकेको हुनाले धेरै बेवास्ता गर्न सकिन । आएँ ।
नेभर लाई, नेभर लाई, नेभर लाई । तीन पटक फत्फताएर ऊ क्याफेमा छिर्यो । एल आकारको कोठामा ढोकाकै छेउमा काउन्टर रहेछ । काउन्टरसँगै पनि टेबल कुर्सी त थिए तर ऊ ‘एल’ आकार घुमेर एलको अन्तिम विन्दुमा कम मान्छे भएतिर कुनामा पुग्यो । यही बेला विन्दुको म्यासेज आयो । पाइन्टको गोजीभित्र म्यासेजको घण्टी बज्यो ‘टिंङ’ । कर्केकर्के हुँदै अलिकति मोबाइल चियाएर हेरेँ । लामो टेक्स्टको अन्तमा थियो–‘कहाँ भेटौँ ?’
दुई लाख रुपैयाँ । तीन महिनाको भाका । दस महिनादेखि सम्पर्कविहीन । यतिखेर म मुसा, स्वरुप ढाडे बिरालो । भोकाएको, रिसाएको छुद्र ढाडे बिरालो । यस्तो अवस्थामा मैले विन्दुको पूरा टेक्स्ट पढ्न सकिनँ ।
‘कता बस्ने ? यता बस्ता हुन्छ ?’ भनेर उसले मलाई सोधेन । स्वरुपलाई लागेको हुन सक्छ, उसले मलाई निक्कै अफ्ठेरोमा सहयोग गरेर पनि मैले उसको गुन देखिनँ । उल्टै धोका थिएँ । हुन त म सधैँ अफ्ठ्यारोमै थिएँ । यो भन्दा ठूला अफ्ठ्याराहरुबाट गुज्रिरहेको थिएँ ।
‘अर्जेन्ट पर्यो’–मानौँ तपाईंको साथीले तपाईँसँग ‘आमालाई अस्पतालमा राखेको छ वा छोराको स्कुलको फी तिर्न पैसा भएन’ भनेर सहयोग माग्यो ? तर कारणको बारेमा तपाईंलाई पूरा विश्वास छैन भने के गर्नु हुन्छ ? सत्यतथ्य बुझ्न थाल्नु हुन्छ या साथीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ ? ‘यस्तो पनि साथी हुन्छ ?’ भन्नुहोला । तर म स्वरुपको त्यस्तै साथी थिएँ । या हुन सक्छ उसले पनि कहिलेकाहीँ झुटो बाहाना बनाएर सहयोग लिएको होस् ।
म पक्का थिएँ, उसले आफ्नो कुराको सुरुवात गालीबाट गर्नेछ । ‘कति ढाँट्न सकेको यार तिमीले ? न फोन उठ्छ, न एसएमएसको रिप्लाई छ । के हो तिम्रो पारा ? ठ्याक्कै १० महिना भयो तिमीले पैसा लगेको ।’
दुई कप कफी आयो । हामी बसेको टेबल नजिकै एक जोडी ग्राहक आए गर्लफ्रेन्ड ब्वायफ्रेन्ड जस्ता । अनुमान गर्ने मेरो बानी छ । अनुमान गर्नु भनेको आफ्नो सोचअनुसारको वास्तविकता निर्माण गर्नु हो । वास्तविकता पनि निर्माण गर्न सकिन्छ । कस्तो अचम्म । मेरो आँखा तिनीहरु तिरै थिए । तिनीहरुतिर हैन, केटीतिर । मेरो यस्तो बानी स्वरुपलाई मन पर्दैन । ऊ मलाई नसोधी २ वटै कफी कप बोकेर उठ्यो । एल अकारको ठूलो कोठाबाट पछाडिपट्टि निस्कने ढोका रहेछ । स्मोकिङ जोन । म फेरि उसको पछि लागेँ ।
ऋण खाएर तिर्न नसकेपछि यस्तै हुन्छ । अझ मजस्तो गैर जिम्मेवार भएपछि । आफूले पैसो कमाउन सक्ने क्षमता कति हो र खर्चको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने मेरो व्याकरणभित्र परेन । घरिघरि रिस उठ्छ तर सोच्छु–‘मैले जानेरै त यो सबै गरेको हैन । ए बाबा, मैले कसैको चोरेर, डकैती गरेर, कसैलाई मारेर त खाएको छैन । ऋण त खाएको हो । सकेको दिन तिरौँला । पैसो भएको भए यसरी भागीभागी हिँड्ने थिएँ ? अरे यार, के अब आफ्नै साथीभाइले ऋण समयमा तिर्न नसकेकोमा यसरी लज्जित बनाउने ? हेप्ने ? नुर गिराउने ? यही तनावका कारणले मैले कुनै अप्रिय काम गरेँ भने वा सुसाइड गरेँ भनेँ ?’ तर मैले यस्तो नियत कमसेकम स्वरुपको अगाडि हुँदा देखाउन सक्दिन थिएँ । उसको अगाडि त्यो हदसम्मको लाचार हुनु पनि आफूलाई गिराउनु नै हो । यो ऋणको कुराबाहेक म ऊभन्दा केमा चाहिँ कम छु र ?
स्वरुप अघि नै सिगरेट तान्न थालिसकेको थियो । टेवलमा राखेको उसको सिगरेटको बट्टाबाट मैले एउटा सिगरेट झिकेँ । भलै उसले मलाई ‘सि ग्रेड’कै साथी ठानोस् । तनावको सिकार भएर लाइटर उसको हातमा फनफनी घुमिरहेको थियो । माग्न सकिन ।
फेरि रिङटोनसहित फोन भाइब्रेट भयो । पक्कै पनि विन्दुको हुनु पर्छ । फेसबुकमा स्वरुप र मेरो कमन फ्रेन्ड रैछन् विन्दु । त्यसैले गोजीभित्रै हात हालेर फोन काटेँ । स्वरुपले विन्दुलाई चिनेको हुनसक्ने डर मलाई थियो । यस्ता विषयमा स्वरुपसँग अचेल म खुलेर कुरा गर्न नसक्ने अवस्थामा छु ।
कुनै पनि बेला स्वरुपको लेक्चर सुरु हुन सक्थ्यो ।
स्मोकिङ जोनमा नयाँ मान्छे आयो । हामी त्यहाँ तीन अधबैँसे भयौँ । उसले हातमा सिगरेटको बट्टा बोकेको थियो । बट्टा देख्दै आकर्षक थियो । सेतो खोलमा बैजनी बक्सभित्र सुन्दर अक्षर देख्न सकिन्थ्यो–सिल्क कट । डस्टबिनमा फ्याली दियो । यस्तो तनावको बेलामा पनि सिगरेटको बट्टाले ध्यान खिच्नु ? अचम्म । अधबैँसे छेऊको कुर्सीमा बस्यो र अर्को त्यस्तै बट्टाबाट सिगरेट निकालेर सल्कायो । अधबैँसेसँग स्वरुप एउटा सिगरेट माग्न चाहन्थ्यो । सायद । तर मागेन । मेरो अनुमान लगाउने बानी यहाँनेर फेरि प्रकट भयो । अरुको बारेमा थाहा नभए पनि अनुमान लाउनु एक किसिमको नसा जस्तो रहेछ । मसँग यो नसा छ । यो बानीलाई कसैले रोग नै भन्छ भने पनि मेरो कुनै आपत्ति हुने छैन ।
सल्काएको सिगरेट एस्ट्रेमा राखेर अधबैँसे ट्वाइलेट गयो । ट्वाइलेट नै गयो होला । ऊ जानेबित्तिकै वेटर आयो, उसको अर्डर लिन । अब भन्नुस् ऊ कहाँ गयो होला ? अनुमान त गर्न सकिन्छ नि । अधबैँसेलाई नदेखेर वेटर फर्कियो । स्वरुप पनि अधबैँसेको टेबलतिर फर्कियो । टेबलको सिगरेटको बट्टाबाट एउटा सिगरेट झिक्यो र सल्काउन थाल्यो ।
ट्वाइलेट नजिकै थियो । फ्लस गरेको आवाज ख्वाल्ल आयो । अधबैँसे पनि आयो । त्यतिञ्जेलसम्ममा उसले एस्ट्रेमा छोडेर गएको सिगरेट सल्केर खरानी भइसकेको थियो । म देखिरहेको थिएँ, खरानी अझै लामो भएर सिगरेटमै अड्किरहेको थियो । झर्यो । उसले बट्टाबाट सिगरेट निकाल्न खोज्यो । बट्टा खाली थियो । उसले हामी बसेको टेबलतिर हेर्यो । अधबैँसेले भन्यो—‘ओ मिस्टर तपाईँले मेरो सिगरेट लिनु भएको हो ? सोध्नु पर्दैन ?’ मैले भन्नु केही थिएन । स्वरुपको मामिला थियो । मैले बोल्दा स्वरुप झन् रिसाउने सम्भावना थियो । म नबोल्न ढुक्क थिएँ ।
स्वरुप अक्मक्कियो । पहिलो पटक उसको र मेरो आँखा एकैपटक एउटै चिजमा पर्यो । सिगरेटमा । अघि त सिगरेट स्वरुपको हातमा थियो । अहिले हाम्रो टेबलको एस्ट्रेमा कलात्मक ढंगले सिगरेटले धुवाँ छोडिरहेको थियो, जसरी ममाथि स्वरुपको विश्वास उड्दै थियो ।
अचानक मैले भने—‘तपाईँसँग मात्रै हुन्छ र त्यस्तो सिगरेट ?’
अधबैँसेले पक्कापक्की गरेर बोल्यो—‘तपाईँसँग त हुनै सक्दैन । मैले लण्डनबाट ल्याएको सिगरेट हो यो । यहाँ पाइँदैन । तपाईँसँग कसरी हुनसक्छ ?’
‘अनि लण्डनबाट हामीचाहिँ सिगरेट ल्याउन सक्दैनौँ ? अचम्म छ ? त्यसै आरोप लाउने ?’ भर्खरै दाइको जेठान लण्डनबाट आएको थियो । त्यसैले पनि आत्मबल बढायो ।
‘आरोप हैन मिस्टर, नत्र सिगरेटको बट्टा देखाउनुस् त ।’
‘ऊ त्यो डस्टबिनमा हेर्नुहोस् ।’
मलाई यस्तो उत्तर दिन, सोच्ने समय नै चाहिएन । यस्तो काइदाको उपाय सोचविचार नै नगरी फुरेकोमा भित्रभित्रै दंग भएँ । मेरो तर्क सुनेर स्वरुप एक पटक ट्वाँ पर्यो । तर, उसले आफू ट्वाँ नपारेको जस्तो गर्यो । डस्टबिनमा सिगरेटको डब्बा मैले नै हालेको झैँ गरेर ऊ ढुक्कसँग सिगरेट तान्न थाल्यो ।
एकछिन त अधबैँसे पनि अलमलमा पर्यो । सायद यस्तो उत्तरको अपेक्षा उसले गरेको थिएन । अपेक्षा त उसलाई सिगरेट चोरिएला भन्ने पनि थिएन ।
उ रिसाएर करायो—‘आर यु सिक ?’
गजबकै शब्दले गाली गर्यो । सहरमा विशेष किसिमको फ्लु चलेको छ । तर ऊ मेन्टल सिकनेसको कुरा गर्दैछ ।
अर्को गाली उसको मुखबाट फुत्किएन ।
भन्यो–‘त्यो बट्टा मैले फालेको हुँ ।’ मान्छे ‘चरित्रवान’ रहेछ ।
आवेगमा ऊ त्यहाँबाट रेस्टुरेन्टको एल आकार कोठातिर लाग्यो । शब्दहरु बुझिएन तर ऊ कसैलाई बोलाइरहेको थियो । ढोकाको सफेद सिसाबाट म उसलाई देखिरहेको थिएँ ।
मौका यही थियो उढेर जाने । तर, मैले नतिरेको स्वरुपको ऋणले मलाई यसरी थिचेको थियो, म उड्न सकिनँ ।
स्वरुप पनि त्यहाँबाट उठ्ने स्थितिमा थिएन । पैसाभन्दा पनि मप्रतिको अविश्वासले कसरी गलाएको उसलाई ? मबाट पैसा उठाउने उपाय सक्किए जस्तो । चुइँक्क बोलेको छैन ऊ । ऊ यसरी मौन छ मानौँ अब हामीबीच कुनै संवाद र सम्बन्ध बाँकी छैन । यसरी बसेको छ ऊ मानौँ अधबैँसेले सल्किरहेको सिगरेटले पोले पनि त्यहाँबाट उठ्ने छैन । तर, अधबैँसेले उसलाई सिगरेटले किन पोलोस् । पोले पनि मलाई पोल्ने होला । उसलाई लागेको छ, त्यो सिगरेट मैले नै सल्काएको हो ।
एकैछिनमा केही थान वेटर्स र क्याफेको मालिक जस्तो देखिने—‘काउन्टर पर्सन’ पनि हुनसक्छ—लाई लिएर आइपुग्यो । उसले आफ्नो विदेशी महँगो सिगरेट चोरस् भएकोमा आपत्ति जनायो । त्यसभन्दा पनि बढी, मैले गलत तथ्यहरु बताएकोमा उसको आपत्ति थियो ।
‘ल ठीक छ, सिगरेट उहाँले चोर्नुभयो । उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो–मलाई खान मन लागेर झिकेँ ।’
मान्छेको अपेक्षा पनि अनेक हुन्छन् । जस्तो–तिमीले यसो भनेको भए हुन्थ्यो । तिमीले यसो गरेको भए हुन्थ्यो । खाएको ऋण यति मितिमा तिरेको भए हुन्थ्यो । म ऊ हैन । म त म हुँ । ऊसले जस्तो मैले कसरी गर्थेँ ? सोच्दै थिएँ ।
मेरो सोच्ने अधिकारलाई हनन् गर्दै ऊ फेरि बोल्यो–‘तर उल्टै गलत कुरा भनिरहनु भएको छ महासयले । यो डस्टबिनमा भएको सिगरेटको डब्बा मैले फ्यालेको हुँ । तर, उहाँ भन्नुहुन्छ उहाँले फ्याल्नु भएको हो ।’
मैले यहाँ रिसाउनु पर्ने कुनै कारण थिएन । तर, उसले बोलाएका अरु मानिसहरुको अगाडि हेपिएको जस्तो देखिनु त भएन ।
रिसाएरै भनेँ—‘हेर्नुस् अधबैँसे महाशय, पहिलो कुरा त तपाईँको सिगरेट खाने इच्छा मेरो हैन । म भए मागेरै खान्थेँ । आइपरे ऋणै माग्थेँ । मेरो मतलब मैले आजसम्म सिगरेट चोरेर खाएको छैन । दोस्रो कुरा के भने नि’¬–मैले फिस्स हाँस्दै भनेँ । यो तनावपूर्ण समयको बीचमा फिस्स हाँस्ने सौभाग्य मलाई किन पनि प्राप्त भयो भने मसँग बलियो तर्क उपस्थित थियो ।
अँ त मैले फिस्स हाँस्दै भनेँ—‘त्यो डस्टबिनमा तपाईँले फालेको सिगरेटको बट्टा मात्रै छ भन्ने के छ ? हामीले फालेको सिगरेटको बट्टा पनि त त्यहीँ होला ।’
आवेशमा गोजीको मोबाइल फोन टेबलमा राखेछु । स्क्रिनमा विन्दुको म्यासेज आएको देखेँ । पुरानै म्यासेज हो वा नयाँ त्यो पनि ठम्याउन सकिन । यस्तो अवस्थामा कसरी पढ्नु ?
‘सिल्क कट सिगरेट यहाँ कसैले पिएको देख्नु भएको छ ?’
अधबैँसेले उसका साक्षीहरुलाई सोध्यो । सबै ट्वाल्ल परेर हेरिरहे । सायद यस्तो किसिमको समस्या उनीहरुकै जीवनमा पहिलो थियो ।
‘सिल्क कटको बट्टा मैले मात्रै फालेको हुँ । त्यहाँ अर्को बट्टा कहाँबाट आओस् ?
उसले त ह ह ह गर्दै आवाजै निकालेर हाँस्दै भन्यो ।
मैले क्याफेका साक्षीहरुलाई डस्टबिन चेक गर्न अनुरोध गरेँ । अधबैँसेले क्याफेका अरु कस्टमरहरुलाई पनि बोलाएर रमिता देखाउने भयो । डस्टबिन चेक गर्नुअघि एकपटक फेरि सबैलाई उसले घटनाको बारेमा जानकारी दियो । सबैले रोचक मानेर सुने । सबै जना डस्टबिनको ढक्कन खोलिएको हेर्न आतुर थिए, सिवाय स्वरुप । उफ, कुन जुनीमा मैले यसको ऋण खाएछु ।
अधबैँसे ढुक्क थियो । म आधा ढुक्क थिएँ । साक्षीहरु अलमलमा थिए । सपेराले सर्प राखेको ढाकीको ढक्कन खोलेकै शैलीमा अधबैँसेले डस्टबिनको ढक्कन खोल्यो । डस्टबिन घोप्ट्यायो । डस्टबिनबाट केही नेप्किन पेपर, चुरोटका ठुटा, २ वटा सिगरेटका बट्टा र एउटा युज्ड कन्डम सानले खसे । अधबैँसे डबल छक्क पर्यो । सिंगल छक्क मेरो आत्मविश्वासको कारणले, दोस्रो छक्क २ वटा सिगरेटको बट्टाको कारणले । तर स्वरुपलाई यो परिणामले कुनै असर गरेको थिएन । उसको मसँगको तनाव घटेको थिएन । एकछिन मौनता छायो त्यहाँ । क्याफेमा कन्डम ? कर्मचारीहरु एकअर्कामा मुखामुख गरेर हावा फुस्किएको बेलुन झैँ चाउरिए । म अनुमान लाउन सक्छु, कर्मचारीहरु एकले अर्कालाई शंका गर्दै थिए । अधबैँसेले ‘सरी’ भन्यो र साक्षीहरुलाई लिएर त्यहाँबाट हिँड्यो । म एउटा संकटबाट बचेँ । तर, सिङ्गै अर्को संकट स्वरुप थियो । जसको स्वरुप झन् ठूलो हुँदै थियो ।
डस्टबिनको फोहोर कसैले उठाउने भेउ पाएन । स्वरुप र मेरो सम्बन् झैँ फोहोर छरपस्ट थियो त्यहीँ ।
लामो सास फेरेर स्वरुपले भन्यो– ‘तिमीलाई यो कुरा भन्न म आफैलाई लाज लागिरहेको छ । मैले तिमी जस्तो अविश्वासिलो साथी पाएँ ।’
स्वरुपको बल्ल बोली फुट्यो । मलाई थाहा थियो, ऊ मलाई तलसम्मै गिराएर गाली गर्न चाहन्थ्यो । उसले अरु केही भन्नुअघि म बोलेँ– ‘ठीक छ मैले गल्ती गरेँ । तर, एउटा पुरानो साथीको नाताले पनि तिमीले मलाई यति ठूलो मानसिक यातना दिन्छौ भन्ने लागेको थिएन । यो करिब २ घण्टामा म बाल्टीको पानीमा डुबेर व्याकुल भएको मुसोझैँ लुत्रुक्क छु । तिम्रो अगाडि निरीह भएर बस्नु परेको छ । यी केही महिनामा तिमीले जति पटक फोन गर्यौ, जति एसएमएस गर्यौ त्यसले मलाई लाचार बनाएको छ । मैले नसकेरै तिम्रो ऋण नतिरेको हुँ । तर तिमीले मलाई बुझेनौ । त्यही भएर पनि म तिम्रो बिहेमा आउन सकिनँ । पार्टीमा त तिमीले खबर नै गरेनौ ।’
उसले ट्राफिक लाइटको रातो बत्तीझैँ आँखा पारेर रुखो स्वरमा भन्यो– ‘छोडिदेऊ पैसा र ऋणको कुरा । मुख्य कुरा तिम्रो नैतिकता र आचरणको हो ।’
त्यसपछि ऊ तुफानझैँ त्यहाँबाट उडेर गयो ।
उफ... कस्तो भयानक घटना । मेरो अगाडि दृश्यहरु थिएनन् । देखेँ त केवल अन्धकार मात्रै ।
ऊ गएको एकछिन पछि सिगरेटवाला अधबैँसे मानिस आयो । उसले मलाई हेर्यो र ऊ अघि बसेको टेबलकुर्सीतिर पनि हेर्यो । त्यहाँ उसले छोडेको दोस्रो खाली सिगरेटको बट्टा थिएन । उसले मेरो छेउमा आएर साउती मारेको झैँ गरी भन्यो– ‘गल्ती गरेको मान्छेले बेलैमा महसुस गरेन भने जीवनभर सरी भन्ने मौका पनि गुमाउने छ ।’ उसले डस्टबिन छेउ ट्वाल्ल परेर लडेका दुवै सिगरेटका बट्टा उठाएर मेरो टेबलमा राखिदियो र मुस्कुराउँदै गयो ।
वेटरले सुँपसुपारीसहितको बिल मेरो टेबलमा ल्याएर फ्यात्त राखिदियो । र, वर्षा याममा भरिएको टुकुचा खोलाझैँ आँखा बनाएर भन्यो– ‘तपाईँले मेरो इज्जतको मजाक उडाउनुभयो सर ।’
मैले उसको आँखामा आँखा जुधाउन सकिनँ । उग्रिएको डस्टबिनको टेढो बिर्कोझैँ ट्वाँ परेँ । एकछिन चुपचाप त्यहीँ बसेँ । गोजीबाट फोन झिकेँ । विन्दुका कति धेरै एसएमएस थिए मैले पढ्ने आँट गरिनँ । छाती भारी भएको थियो । शरीरमा कुनै जाँगर थिएन । मलाई यस्तो हालतमा पुर्याउने दुई शब्दहरु इमान्दारिता र नैतिकताप्रति घृणा जागेर आयो ।
मलाईझैँ क्याफेलाई पनि अचानक उही आदिम शब्द ‘नैतिकता’ले पिरोलेको थियो । गाइँगुईँ हल्लाहरुको बीचमा वेटरहरुले चाल नपाउने गरी क्याफेबाट बाहिर निस्किएँ । ‘टिंङ’—विन्दुको मेसेजले स्क्रिन फेरि बल्यो । मेरा दुवै हातले मोबाइल फोन फनफनी घुमाउन थाले ।
प्रकाशित : भाद्र २७, २०७७ १५:३६